Mubatanidzwa weNyika Pasirose - Wikipedia
22 Dec 2013 - 05 Jun 2019
Sangano reMubatanidzwa weNyika Pasirose (nechirungu United Nations) (MNP-UN) isangano rinokotsvanidza nyika dziri pasirose; sangano iri rakaumbwa mugore 1945 zvichitevera kupera kweHondo yePasirose yeChipiri. Sangano iri rine zvinangwa zvina zvinoti:
Kuchengetedza runyararo Pasirose.
Kukurudzira kuwadzana pakati pemarudzi nenyika pasirose.
Kubatsira marudzi nenyika kushanda pamwechete nechinangwa chokupedza:hurombo; nzara; zvirwere; nekusadzidza, uye kururudzira kuremekedzana pakati pemarudzi nevanhu panhau dzine chokuita nekodzero dzevanhu nerusununguko rwevanhu.
Kuva muzinda unoringanisa nokuyananisa mabasa anoitwa nemarudzi nenyika kuti vakunde pazvinangwa zviri pamusoro izvi.
Muzinda weUnited Nations uri kuNew York, United States of America.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mubatanidzwa_weNyika_Pasirose&oldid=38038"
This page was last modified on 21 Ndira 2015, at 00:04.